Ozi ahụ Na - ejikọ Ozi Esemokwu Agbanye na Ahụmịhe Ekwentị Na Storelọ Ahịa | Martech Zone
Ozi ahụ na - ejikọ ozi ịkọwapụta na ahụmịhe ekwentị mkpanaka
Wenezdee, Machị 18, 2015 Douglas Karr
SmartFocus mara ọkwa na Nzukọ Ndị Na-ahụ Maka Mkpụrụ Obi taa na ọ ga - enye ihe ngosi akara ngosi nke ụwa. Ihe mgbama ndị ahụ na-enye ohere maka ịre ahịa dị nso na-enweghị ngwakọ ngwaike ma ọ bụ ndozi siri ike. Ndị ụlọ ọrụ nwere ike ịkpalite izipu micro-ọnọdụ iji mee ka ahụmịhe metụtara ọnọdụ na-eji naanị atụmatụ ala.
SmartFocus si Igwe ojii teknụzụ na-enye ndị na-ere ahịa akara otu echiche zuru oke nke ndị ahịa ha, na-enyere ha aka ịnapụta mmekọrịta mmekọrịta ahaziri iche karịa nke gụnyere itinye onyinye, ịkwụ ụgwọ, ikwesị ntụkwasị obi, na nyocha.
Ndị ahịa ọ bụla nọ na njem nke ha pụrụ iche. Mkpali iji nwaa, zụta, ma ọ bụ iguzosi ike n'ihe gbanwere dabere na onye ahụ na-ahọrọ. Mobile nwere ikike nke 24/7 ịbanye na 'akara ntanetị' nke ndụ onye ahịa gị na ike iji mee ka ozi mgbasa ozi ahaziri iche nke ọnọdụ dị mma karịa usoro ọ bụla ọzọ. Rob Mullen, CEO na SmartFocus
Igwe ojii na-edozi data buru ibu iji hazie nkwukọrịta na ndị ahịa ọ bụla. Iji ọtụtụ ihe gụnyere ọnọdụ, ihu igwe, afọ ndị ahịa na okike, ụdị ngwaahịa na ngwaahịa kachasị amasị, akụkọ nchọgharị weebụ, omume ịzụ gara aga na ụgbọ ala agbahapụ, Ozi Cloud na-ege ntị ma mụta n'aka ndị ahịa.
UK kasị buru ibu na-ere ahịa, ndị Entertainer, na-eji SmartFocus's Cloud Cloud.
SmartFocus na-enyere aka ime ka ahụmịhe ndị ahịa anyị bụrụ ihe kachasị mma ọ nwere ike ịbụ, n'agbanyeghị agbanye ọwa anyị na-eji, yana SmartFocus Message Cloud na-ahụ na mụ na ndị otu m nwere ike ịnye ahụmịhe onye ọrụ zuru oke oge ọ bụla. Megharị ahụmịhe ụlọ ahịa anyị mgbe onye ọ bụla n'ime ndị ahịa anyị gara na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ nata otu n'ime ozi ahịa anyị dị anyị mkpa. Ihe ngwọta SmartFocus nyere anyị ike niile anyị chọrọ na otu, ikpo okwu zuru oke. Phil Geary, Onye isi ahịa ahịa nke Entertainer
SmartFocus bụ onye na-eme nchọpụta na izi ozi na nkwukọrịta, na-enyere ụdị ndị kachasị ibu n'ụwa aka - gụnyere Nestlé, Mercedes-Benz, Macy's na Levi na iji ghọta ma jikọọ nke ọma n'etiti ndị ahịa ejikọtara taa; ma nke ahụ sitere na weebụ, ekwentị mkpanaaka, email ma ọ bụ ọwa mmekọrịta. Site na Ozi Cloud Cloud ngwọta, SmartFocus ji ezi obi na-ege ntị ma na-amụta site na ndị ahịa na-eji patent algọridim na ngwaọrụ pụrụ iche dabere na ahịa. Iji Ozi igwe ojii, ndị ahịa SmartFocus nwere data bara ụba, ọgụgụ isi na ngwaọrụ maka itinye aka na mmekọrịta pụrụ iche, site na ọwa dijitalụ ọ bụla.
Tags: osisigburugburu ahịanzuko ụwa dumidi nso ahiaretailsmartfocusozi igwe ojii